European Commission inosimudza mari yekupa nhomba muAfrica
Location: musha » Kutumira » African Tourism Bhodhi » European Commission inosimudza mari yekupa nhomba muAfrica
European Commission nhasi yazivisa chinangwa chayo chekuwedzera mari yekumhanyisa kuburitsa uye kutora mishonga yekudzivirira uye mamwe maturusi eCCIDID-19 muAfrica, paine imwezve mamiriyoni mazana mana erutsigiro. Komisheni inofanoonawo €400 miriyoni euros ($427 miriyoni) mupiro kuGlobal Pandemic Preparedness Fund kutsigira kuedza kudzivirira uye kupindura zvirinani kudenda remangwana.
Vachizivisa EU yakawedzera rutsigiro paChipiri COVID-19 Summit, Mutungamiriri weEuropean Commission, Ursula von der Leyen, akati: "Kupihwa kwejekiseni kunofanirwa kufambidzana nekukasira kuendesa, kunyanya muAfrica. Chinonyanya kukosha nhasi ndechekuita shuwa kuti dosi yese iripo inopihwa. Uye nekuti isu tinoziva kuti mhinduro yakanakisa kune chero ramangwana rehutano dambudziko rekudzivirira, isu tiri kuwedzera rutsigiro kusimbisa hutano masisitimu uye kugona kugadzirira. "
Commissioner for International Partnerships, Jutta Urpilainen, akati: "Denda rakashanduka uye kuwanikwa kwejekiseni kwadzikama, tichitenda muchikamu cherupo rwemari uye nerupo rweChikwata cheEurope kuCOVAX. Takanzwa vatinoshanda navo vemuAfrica: dambudziko riripo nderekukurumidza kuburitswa uye kutora mishonga pasi, uye kupindura kune zvimwe zvinodikanwa zvemhinduro yeCCIDID-19, kusanganisira yekurapa, yekuongorora, uye hutano masisitimu. Saka tichagadzirisa mhinduro yedu kubatsira nyika kurwisa denda iri kuburikidza nerutsigiro rwakagadzirirwa uye kugadzirira ramangwana. "
Kubva kumajekiseni kusvika pakudzivirira, kugadzirira denda
Mukupindura kuchinjika-kudiwa kwemamiriro ezvinhu eCCIDID-19 vaccines, EU iri kugadzirisa kuedza kwayo nekutsigira kushandiswa kwakanyanya kwemadosi aripo. Kuve nechokwadi chekuwanikwa kwakaenzana kune asiri ekudzivirira maturusi kunoramba kwakakosha, sekusimudzira kusimba kwehurongwa hwehutano kugadzirira denda rinotevera. Rutsigiro rwapikirwa nhasi, sechikamu chemhinduro yepasi rose yeTeam Europe, inoda kufambisira mberi zvinangwa izvi.
€ 300 miriyoni rutsigiro rwekudzivirira muAfrica kuburikidza neCOVAX Facility nevamwe vadyidzani. Mari iyi inoitirwa kutsigira kupihwa kwezvinhu zvekubatsira senge majekiseni, manejimendi ekutengesa, kutakura zvinhu uye kuendesa masevhisi, uye kutonga kwejekiseni.
€ 100 miriyoni rutsigiro rwekuwana mamwe maturusi eCCIDID-19: diagnostics, therapeutics uye kusimbisa hutano masisitimu. Pamwe chete nemamiriyoni makumi mashanu emamiriyoni emadhora akaunganidzwa nguva pfupi yadarika nechinangwa chimwe chete, rutsigiro urwu rwunokosha miriyoni zana nemakumi mashanu pazere rwakatarisirwa kuendeswa kuburikidza neCOVID-50 Response Mechanism yeGlobal Fund yekurwisa AIDS, Tuberculosis neMalaria.
€427 ($450) miriyoni yeGlobal Pandemic Preparedness Fund iyo ichagadzwa, zvichienderana nechibvumirano chehutongi hwayo. Iyo Homwe ichakwirisa mari yekugadzirira denda uye mhinduro, zvichibatsira kudzivirira kudzokororwa kwehuipi hunoparadza hutano uye hwemagariro nehupfumi hweCOVID-19 mune ramangwana.
Mutungamiri von der Leyen neMutungamiriri weBiden vakasimbisawo kuzvipira kwavo kuUS-EU Agenda yekurova Global Pandemic, Kudzivirira Nyika, Kuponesa Upenyu Zvino uye Kuvaka Kudzoka Zvirinani, kwakatangwa pamusangano wekutanga weCCIDID-19 munaGunyana 2021. chirevo, vanotsanangura kuenderera mberi kweEU - US kubatana uye zvinangwa zvakagovaniswa munzvimbo dzekuenzana kwejekiseni uye pfuti mumaoko; kusimbisa cheni dzekugovera pasi rose nekugadzira; kuvandudza kuchengetedzwa kwehutano hwepasi rose chivakwa; kugadzirira kutyisidzira kwepathogen mune ramangwana uye njodzi; uye tsvagiridzo nekusimudzira kwemishonga mitsva yekudzivirira, kurapwa uye kuongororwa.
Covid-19 Europe European Commission Tuberculosis vaccination